Maybelline က အသစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ စွယ်စုံသုံး Superstay Multi-Use Foundation Stick | CosmeticMyanmar
Home » Article » Maybelline က အသစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ စွယ်စုံသုံး Superstay Multi-Use Foundation Stick
wpfမိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေကလည်း ရှေ့ကဝယ်နောက်ကအသစ်တစ်မျိုးထွက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ခေတ်မှီမှီနဲ့ပေါ်သမျှထွက်သမျှလိုက်သုံးနေဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ အသစ်အသစ်တွေကလည်း အမြဲတမ်းလိုလိုထွက်နေတာဆိုတော့ အချစ်တို့က ဝယ်ဖို့တာဝန်ကိုယူ မင်မင်ကတော့ သတင်းပေးတာဝန်ကိုယူပေးမယ်နော် ဟိဟိ အခုလည်း အသစ်ထပ်ထွက်လာတဲ့ ပစ္စည်းသစ်လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမလို့။
Maybelline ဆိုတာကတော့ ကမ္ဘာကျော်နာမည်ကြီး brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင် အရည်အသွေးကောင်းတဲ့မိတ်ကပ်တွေ skincare တွေကြောင့် မိန်းကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဆယ်စုနှစ်မက နေရာယူထားနိုင်ခဲ့ပြီလေ။ ကောင်းမွန်တဲ့အရည်အသွေး သင့်တင့်တဲ့စျေးနှုန်းတွေကြောင့်လည်း ထွက်သမျှပစ္စည်းတိုင်းကတစ်ကယ့်ကို review ကောင်းတွေရပြီးတော့ အောင်မြင်နေတာပေါ့။ အခုလည်း Maybelline က သူရဲ့နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေအတွက် ပစ္စည်းဆန်းလေးကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီနော်။ ဘာလေးလဲဆိုတော့ Stick Foundation လေးပါ။
Stick Foundation ဆိုတာကတော့ foundation ကို stick ပုံစံလေးအနေနဲ့ထုတ်ထားတာပါ။ အရှင်းဆုံး ပြောရရင် ဘောပင်လိုလှည့်ဖွင့်ရတဲ့ ပုံမျိုးလေးပါ။ သူကတော့ မိတ်ကပ်ကို လက်နဲ့တင်မလိမ်းချင်, မပေချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ။ Liquid foundation တွေကြတော့ မှန်းရခက်တယ်ပေါ့နော်။ လက်ပေါ်မှာ ပိုနေတာတွေ များများယူလိုက်မိတာတွေကတော့ ဖြစ်နေကြပြဿနာတွေပါ။ အခုတော့ ဒီလို stick foundation တွေက စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူးနော်။ ကိုယ်လိုသလောက်ကို မျက်နှာပေါ်ကို တင်ပြီးလိမ်းလိုက်ရုံပဲ။ နည်းနည်းတော့ ဆွဲရမှာပေါ့နော်။
အခု Maybelline Stick Foundation အရင် က ထွက်ဖူးတဲ့ super stay foundation ကိုပဲ update လုပ်လိုက်တာပါနော်။ Super Stay တုန်းကလည်း အရမ်းကိုဝက်ဝက်ကွဲတွေအားပေးကြတာလေ။ Review တွေလည်းအရမ်းကောင်းခဲ့တောကြောင့်သူတို့လည်း နောက်ထပ်ထုတ်တာလို့ထင်ပါတယ်။ စီးပွားရေးသောင်းကျန်းချက် ?
စုစုပေါင်းအရောင် ၁၆ ရောင်ရှိပြီးတော့ သူက foundation သီးသန့်ချည်းပဲမဟုတ်တော့ဘူး။ Concealer လား Bronzer လား? Multiuse သုံးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးပါ။ အရောင်ကတော့ အနက်ဆုံးကနေ အဖြူဆုံးထိရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ Contouring ဆိုရင်လည်း ရွေးစရာအရောင်တွေအများကြီးမို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ Concelaer ကတော့ ရွေးချယ်စရာအရောင် နည်းပါတယ်။
Cream to matte formula+ precision blender full coverage လို့ရေးထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ covreage ကတော့ ပြောစရာမလိုအောင်ကို ကောင်းလွန်းလှတော့ မျက်နှာက အပြစ်အနာအဆာတွေအတွက် concealer ကောင်းကောင်းလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒါလေးကအဆင့်သင့်စောင့်နေတာနော်။ သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်လေးကတော့ တစ်ဖက်မှာ foundaton ပေါ့နော်။ နောက်တစ်ဖက်ကတော့ blend လုပ်ဖို့အတွက် sponge လေးကို တပ်ပေးထားတာပါ။ ခရီးတွေဘာတွေထွက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတာပေါ့။ ပြီးတော့အဖုံးလေးတွေပါတော့မသန့်မှာကိုလည်း စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူး။
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ မျက်နှာကို ကိုယ်လိမ်းချင်တဲ့နေရာလေးတွေကို လိုက်ဆွဲပြီးတော့ sponge လေးနဲ့လိုက်ပွတ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ ဝက်ခြံလေးတွေ, အမည်းစက်လေးတွေ ဆိုရင်လည်း concelaer လေးကို အဲ့ပေါ်လေးတွေကိုလိုက်တို့ပြီးလက်လေးနဲ့ပုတ်ပုတ်ပြီးလိမ်းပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ။ ဘယ်လောက်လွယ်လိုက်လဲ?
စျေးနှုန်းကတော့ $11.99 ဖြစ်ပြီးတော့ မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တော့ 18000 လောက်ပါ( ငွေအတက်အကျပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ဒါလေးကတော့ ဒီကကောင်တာတွေမှာ မရောက်သေးပေမယ့် သိပ်မကြာခင်မှာပဲရောက်လာတော့မှာပါ။ စောင့်နေနော် အချစ်တို့။
သူ့မှာပါတဲ့ sponge လေးကလည်း ထိပ်ချွန်လေးဆိုတော့ contouring လုပ်တဲ့နေရာမှာ အရမ်းကို အဆင်ပြေစေမှာပါနော်။ တစ်ခုသတိထားရမှာကတော့ contouring လုပ်ပြီးရင် မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အခါ အဲ့ sponge နဲ့ blend မလုပ်မိဖို့ပါ။ မျက်နှာတစ်ခုလုံးကို မည်းသွားစေနိုင်လို့ပါ။
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ကျေနပ်ကြလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ တကယ့်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်လို့ သုံးကြည့်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။
ဆံပင်အရောင်ဆန်းတွေကိုခဏလေးနဲ့ဆိုးလို့ရစေမယ့် L'oreal ရဲ့ 1_Day Hair Spray